Ramangwana rine tariro kwazvo reakavhurika sosi mumabhizinesi | Linux Vakapindwa muropa
Iyo ramangwana rine tariro kwazvo reakavhurika sosi mumabhizinesi
Pakupera kwegore rapfuura ini ndakatumira chinyorwa kutaura pamusoro pekuti makore gumi akatanga zvakanaka zvakadii muna 2010 anga ari evhoriyamu yakavhurika. Sezvazvinoratidzika, zvinhu zvinozongoita zvirinani.
Red Hat kuchaja chidzidzo pamusoro pekushandiswa kweyakavhurika sosi software mune bhizinesi nharaunda. Mhedzisiro yacho inopa vatsigiri venzvimbo yakavhurika sosi zvikonzero zvakawanda zvekuva netariro.
Kuti uve nechokwadi chekurongeka kwemhedzisiro, vanhu vaive nesimba pasarudzo tenga mukati mesangano rako: kunyorera chikumbiro, zvivakwa zvekushandisa, gore, chengetedzo, middleware, server inoshanda sisitimu kana kuona. Chimwe chinodikanwa ndechekuti ivo vaiziva nezve bhizinesi rakavhurwa sosi uye vaive neinenge 1% Linux yakaiswa mumasangano avo. Tsvagiridzo yakaitwa zvizere mu2019 uye yaisanganisira iyo US, United Kingdom, Latin America (Argentina, Brazil, Chile, Colombia neMexico) uye nyika dzinotaura Chirungu munzvimbo yeAsia / Pacific (Australia, New Zealand, Hong Kong uye Singapowo). Ini handizive kuti nei dzimwe nyika dzeEuropean dzisina kuiswa.
ari Mhinduro 950 dzakaparadzirwa zvinotevera
400 muUnited States.
250 muLatin America.
150 munzvimbo yeAsia Pacific.
1 Nei ramangwana rine tariro kwazvo rinotarisirwa
1.1 Zvinonzwisisika zvipingamupinyi zvekuvhura sosi kuitisa
1.2 Inonzwisisika mabhenefiti ekushandisa bhizinesi rakavhurika sosi software
Nei ramangwana rine tariro kwazvo rinotarisirwa
Chinhu chekutanga chinonakidza chinobuda mu data ndeche kudzikira kwekushandiswa kwesoftware yekambani mumakambani. Ongororo yegore rapfuura yakaratidza kuti 55% yesoftware inoshandiswa nemakambani yaive. Ongororo yegore rino inodonhedzera muzana kusvika pa42% uye kurasikirwa kwemapoinzi gumi kunofungidzirwa mumakore maviri anotevera. Nekuremekedza yakavhurwa sosi, ongororo yakaitwa naRed Hat nemunyori pane tekinoroji misoro Gordon Haff, inosiyanisa zvinhu zviviri. Vhura sosi inogadzirwa nemakambani ichaenda kubva ku36% kusvika 44%. Kushamisika kukuru kwaive kuwedzera kunonoka asi kwakadzikama mukati kushandiswa kweyakavhurika sosi software yakagadzirirwa nharaunda. Akawana 3% mune rimwe gore kusvika ikozvino 19%. Inotarisirwa kusvika 21% muna 2021
Chimwe chiratidzo chakange chakasvetuka chakakosha chaive icho vatungamiriri vari kuronga kuwedzera mashandiro ebhizinesi open source software. Kubva 59% gore rapfuura kusvika 77% gore rino. 22% ichachengetedza iyo yazvino nhanho uye 1% inoronga kuideredza.
Zvinonzwisisika zvipingamupinyi zvekuvhura sosi kuitisa
Inobvunzwa pa zvikonzero zvinogona kudzivirira kutorwa kwemhinduro dzakavhurika dzebhizinesi sosi, Vakapindura vakanyora zvakafanana zvipingamupinyi zvitatu gore rino segore rapfuura: chengetedzo, rutsigiro uye kuenderana.
Haff anofunga kuti uku kusarura kwakadzika midzi, asi pasina chikonzero. Semuenzaniso, kunetsekana kwekuchengeteka kunogona kureva kutenda kuti kuwanikwa kwekodhi yekodhi kunoita kuti software inyanye kubatwa nekurwiswa, kunyangwe iyi isingawanzo senzira yekushomeka inoshandiswa. Panyaya yekutsigirwa, zvinokwanisika kusanganisa nharaunda-inotsigirwa (uye nekudaro-yekuzvipira-yakavhurwa sosi ine bhizinesi yakavhurwa sosi, iyo netsananguro inotsigirwa zvine mutsindo software yebhizinesi.
Chimwe chingatadzisa chipingamupinyi kushomeka kwemukati hunyanzvi hwekushandisa kana kushandisa.
Inonzwisisika mabhenefiti ekushandisa bhizinesi rakavhurika sosi software
Chikonzero chikuru chakapihwa chekushandisa yakavhurika sosi bhizinesi zvirongwa ndechekuti hunhu (33% yemhinduro) Mubvunzo we costo yakadzoserwa kunzvimbo yechipiri ne30%.
Zvimwe zvikonzero zvaive:
Gadzirirwa iro gore 28%
Kugona kutora mukana weimwe yakavhurwa sosi matekinoroji 28%
Kuwana kunezvazvino zvigadzirwa 27%
Ichokwadi ndechekuti ini handitendi mumapurisa. Uye zvakanyanya kushomeka mune ongororo iyo yekupedzisira chinangwa ndechekuparadzira. Kunyangwe kana mhedzisiro iri yechokwadi, zvinogara zvichikwanisika kuwana mhinduro dzinodiwa nekusarudzwa kwevanopindura uye mibvunzo. Kana iwe ukatsvaga zvakaringana, iwe unogona kuwana yepamutemo software mutengesi ongororo iyo inotaura yakapesana chaizvo neiyo ini yandiri kuongorora.
Zvisinei, Ichokwadi kuti rakavhurika sosi matekinoroji, kunyanya avo vane rutsigiro rwemakambani, vari kuve nekuiswa kwakasimba pakati pevashandisi vakuru. Uye izvo zvakanaka sekureba sekunge mabhenefiti anosvika kune vatengi vemakambani anoashandisa.
Kana zvasvika pakushandiswa kwenharaunda mhinduro nemakambani, ini handigoni kurega kufunga nezve Heartbleed.
Uku kunetsekana kwakakomba muOpenSSL encryption raibhurari. Raibhurari iyi yaishandiswa kunyangwe nemakambani makuru eetekinoroji, hapana kana rimwe rakabatana nemari kana vashandi mukusimudzira kwayo. Anoshanda zvakanyanya anozvipira mushambadzi akaita chikanganiso chinogona kutungamira kune rakakomba dambudziko rekuchengetedza.
Ndinovimba kuti masangano anovashandisa anogovera chikamu chidiki chezvavaizobhadharira mhinduro yekutengesa kuti ive nechokwadi chehunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo ramangwana rine tariro kwazvo reakavhurika sosi mumabhizinesi
Mutsara chaiwo waunovhara nawo chinyorwa ichi ndicho chikonzero nei iro ramangwana risina kunyatso tarisira kune vanogadzira avo vari kunyanya kunetsekana uye vasingaone chikamu chebhenefiti iyo software yemahara yavanogadzira inogadzira makambani anoshandisa.
Kutarisira makambani kuti ape chikamu chikamu chezvavangabhadharira makwikwi ekupa marezenisi panzvimbo yekufunga kuti kukura uku kunofanirwa kuchinjwazve kuti vafungisise mhando yakanaka iyo inobvumidza vanogadzira kurarama kubva pamhinduro dzavanogadzira kuri kuwedzera kusagadzikana uko vazhinji vavo vanogara uye nekuwedzera purofiti yemakambani aya pamwe nekusaenzana munyika ino.
Nyika yese iri kuenda kune ini handitende iwe zvakare, ndakanyengerwa kakawanda zvekuti ndakarasa chivimbo chose uye haisisiri iyo yekuti ndinofunga ... zviri pachena.
Nyika yese ichaenda kune "zviite iwe pachako" pamwe nezvose zviri muhupenyu, izvo zvakagadzirwa pamba zviri nani uye zvakapfuma.
Saka vakomana mapurogiramu ekuhaya, vanobatwa nehuori hwavo hwese uye pane zvavari kuda ... ivo vari kuzopedzisa roll.
Munhu akafanana neizvozvo, ziso risingaone ... moyo usinganzwe ... kana kundiudza mumwe kana ndakanganisa.
Kuzivikanwa kwenzvimbo yakavharwa kwatove kwakazadza girazi, isu tinoda kodhi yacho kuumbiridza uye kuongorora
hapana imwe mhinduro.
Ini ndinosimbisa kuti huchenjeri hwese ndohwevanhu vese, seye chete mhuka yekufungisisa mammalian. Kwazisai ex-.quadrupeds.
Multi-Account Containers: nyowani yekuwedzera inosanganisirwa nekutadza muFirefox 75 uye kuti iwe unogona kuyedza izvozvi
US inoda kumisikidza semiconductor kupinda kuHuawei